Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay Xarunta Gaadiidka iyo Dhulbixinta Dowladda Hoose oo dib loo dhisayo 30 sano ka ddib+Sawirro - Hargeele - Wararka Somali State
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigay Xarunta Gaadiidka iyo Dhulbixinta Dowladda Hoose oo dib loo dhisayo 30 sano ka ddib+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyeha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) ayaa dhagax-dhigay Xarunta Gaadiidka iyo Dhul-bixinta Dowladda Hoose ee Xamar oo dib loo dhisayo.
Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in muddo 30 sano ah kaddib dib loo dhisayo Xaruntan, iyadoo sanadihii la soo dhaafay ay xarummo ku mel gaar ah ku shaqeynaayeen Laanta Gaadiidka iyo Dhulbixinta ee Dowladda Hoose.
“Muddadii la soo dhaafay, waxaan xoogga saareynay in aan dib-u-dhisno xarumihii danta guud ee bulshada loogu adeegayay, kuwaas oo ay kaalin weyn ka qaadanayaan bulshada Caasimadda oo si wadajir ah ugu istaagay dib u dhiska dalka iyo ka qeyb qaadashada barnaamijyada isxilqaan ee socda.”
Duqa Muqdisho, waxuu tilmaamay in xilligan Gacanta lagu hayo dhismooyin Waddooyin dhowr ah iyo xarumo Maamulka oo qaarkood ay gabo-gabo marayaan, kuwa kalana mashruucooda dhismaha uu socdo.
Sidoo kale, Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in dib u dhiska xarunta ay qeyb ka tahay qorshaha horumarinta Caasimadda ee sanadkan oo lagu soo celinayo xarummo dowladood, goobo nasasho iyo kaabeyaasha dhaqaalaha, kuwaas oo muhiim u ah horumarka Caasimadda.
Newcastle United oo taako u dhigtay kooxda Man City oo marti ugu aheyd garoonka St James’ Park …+SAWIRRO
Liverpool oo sii dheereysatay hogaanka horyaalka, xilli Chelsea ay guuldarro kala kulantay West Ham … +SAWIRRO
Maamulka Degmada Heliwaa oo si weyn u xusay 60 guurada xornimada iyo Midnimada Dalka “SAWIRRO”
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo soo gaaray Muqdisho
Ilaalinta Hantida Guud Waa Mas’uuliyad Wadareed !